Dhimasho Ayey Keeni Kartaa ..Cuntooyinkan Moos Ha Ku Cunin | Xaqiiqonews
Dhimasho Ayey Keeni Kartaa ..Cuntooyinkan Moos Ha Ku Cunin
Khubaro caafimaad ayaa dadka uga digaya hadii cuntooyinkan lagu cuno moos in jirka ay ku sababeeyso xanuun, gaar ahaan digniinta waxa ay quseysaa dadka qaba xanuunada caloosha iyo beer yaraha.
Talada ugu horeysa waxa ay tahay ha isku cunin mooska iyo nooc qaraha ka tirsan, gaar ahaan qaraha loo yaqaan Hami ee inta badan laga isticmaalo shiinaha, maxaa yeelay arintaasi waxa ay qofka ku sababi kartaa wadno xanuun, kiliada oo shaqada joojiso, sida ay laga soo xigtay webseetka shiineyska ah ee Soho.
Khubarada ayaana ku doodaya in mararka qaar qofka uu u dhiman karo hadii uu isku cuno mooska iyo qaraha Hami.
Dadka qaba xanuunada Beer yaraha iyo Calool xanuunka, waa in ay ka fogaadaan in ay isku cunaan moos iyo caano gaar ahaan caanaha warshadeysan, arimahani waxaa ka dhalan kara calool xanuun, shuban iyo waliba dhibaatooyin ku imaada dheef shiidka.
Sidoo Kale Aqri..iska Fiiri..5 tan Sabab Dartood Ha Tuurin Qubka Mooska
Dhanka kale ma haboona in la isku cuno mooska iyo bataatiga macaan, madaama bataatiga qani ku yahay duman (fiber), waxa ay arintani dhib ku keeni kartaa dheef shiidka.
Ugu dambeyn.. hadii aad jeceshahay in aad cunto cuntooyinka, khubarada ayaa soo jeedinaya in cunitaankooda uu u dhaxeeyaa ugu yraan muddo 30 daqiiqo ah.